Ciraaq:al-Baghdadi Wuu Dhaawacmay
Saraakiil sare sare oo Ciraaqiyiin ah ayaa ku soo waramaya in hogaamiyihii ururka Islamiga ah ee ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, lagu dhaawacay duqeyn cirka ah, laakiin Saraakiisha Pentigonka Mareykanka ayaa sheegay in xaqiiqda warkaasi aysan heyn.
Wasiirka Difaaca ee Ciraaq, Khalid al-Ubaydi ayaa soo fariin uu soo dhigay boggiisa Facebookga waxa uu ku xaqiijiyay in Al-Baqdadi uu ku dhaawacmay duqeyn ay Jimcihii ka fuliyeen Mareykanka magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq.
Wasiirka Arimaha Gudaha ee Ciraaq ayaa sidoo kale warkaasi u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee Associated Press.
Warar kale oo kala duwan oo duqeyntaasi ka soo baxaya ayaa sheeganaya in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah kaaliyeyaasha Baghdadi oo ay aad isugu dhawaayeen.
Gelinkii hore ee Axaddii shalayna , sarkaal sare oo ka tirsan milatariga Britain ayaa ka digay in xitaa hadii wararkaasi ay xaqiiq yihiin, in ISIS ay wax ka bedeleyso hogaankeeda.
Madaxa shaqaalaha gaashaandhigga ee Britain Nick Houghton ayaa ku sheegay wareysi uu siiyay Telefishinka BBCda in xitaa hadii Baqdadi la dilo inaysan durbadiiba ka dhigneyn dib u dhac istraatiijiyadeed oo kooxda soo wajahday.